Su’aalo Ra’iisul wasaare Khayrre lagu weydiin doono Washington – Hornafrik Media Network
Su’aalo Ra’iisul wasaare Khayrre lagu weydiin doono Washington
Muqdisho (Hornafrik)-Ra’iisul Wasaarada Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo magaaladda Washington uga qayb galaya shir maaliyadda iyo deyn cafiska Soomaaliya ku saabsan ayaa laga doonayaa in uu ka jawaabo su’aalo badan oo muhiim ah, kuwaasi oo laga weydiin doono Wax qabadka xukuumaddiisa iyo caqabaha ku gaadaaman.
Mareeykanka ayaa waxaa uu kordhiyay Taageeraddda uu siiyo Soomaaliya waxaana uu gaarsiiyay $900 oo million halka uu markii hore siin jiray $500 oo million. Soomaaliya lacago kale ayey ka heshaa Beesha Caalamka, hadaba Ra’iisul wasaare Khayre waxaa laga doonayaa in uu sharaxo haddii uu jiro wax horumarin ah oo Dowladdu la cagahaas u adeegsatay ee dhinacyadda Amaanka, dhulka ay maamusho, dhaqaalaha iyo Waxbarashadda.
Hadii ay Soomaalinad mushaar yar ku qaban karaan Shaqo fiican maxaa Soomaaliya u diiday?
Su’ssha 4 aad: Muxuu safarka Farmaajo u badan yahay?
Madaxweyne farmaajo ayaa xafiiska waxaa uu yimid isagoo Madaxweynihii ka horreeyay ku dhaleeceeyay safarradii badanaa ee caalamka uu ka aadi jiray isagoo sheegay in uu wadanka joogi doono hase ahaatee waxaa soo muuqday markii uu xafiiska la wareegay kadib in safaradiisu ay is daba jog noqdeen.
Su’aasha 5 aad: Soomaaliya ma bad-baadi kartaa markii AMISOM ay dhamaato?
Yaa dacwad loogu soo oogay in mushaarkaii ciidanka uu xaday?
Ma rijeeyneeysaa in Soomaaliya ay Al-shabaab iska caabin karto hadii Ciidanka aysan fileynin in ay dagalamaan?
Shir u dhaxeeyo Guddiyada Dastuurka oo maanta lagu soo gaba gabaynayo Kismaayo.